Ibonwe kangaphi 1,466 (Ama)Ixesha #Umnqophiso Omtsha
Singamkela Usindiso lukaThixo Kwindawo Apho Sinokufunda, Sithobele Amazwi kaThixo
Abantu abaninzi bathi bakholelwa kuThixo, kodwa uYesu wabona kwangaphambili ukuba abazukuzilandela iimfundiso zikaThixo. Phambi kokuba abuyele eZulwini, Wacela ngokunyanisekileyo kubafundi Bakhe ngolu hlobo, ”Nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniwisele umthetho ngazo.”
Leliphi iBandla Elinobungqina Bobomi Obungunaphakade Obunikezwa NguThixo?
Phakathi kwamabandla amaninzi ehlabathini, liBandla likaThixo kuphela elinePasika yoMnqophiso Omtsha, ubungqina bobomi obungunaphakade, nelilandela iimfundiso
zikaYesu njengeBandla lamandulo. Lisekwe nguKristu uAhnsahnghong noThixo uMama.
Weza uYesu… …Hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke iintlanga, nibabhaptizela egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele; nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniwisele umthetho ngazo. Niyabona, mna ndinani yonke imihla, kude kube sekuphelisweni kwephakade eli.